Japana: Tahotra any Fukushima · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2011 17:06 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Français, Português, srpski, bahasa Indonesia, 繁體中文, 简体中文, Español, македонски, English
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Horohorontany Japana 2011 ity lahatsoratra ity.
Ny andro taorian'ny nandonan'ilay horohoron-tany manana tanjaka 8.9 an'i Japana, nisy fipoahana tao amin'ny Ozinina Famokarana Hery Nokleary any Fukushima Daiichi, 150 miles Avaratr'i Tokyo, dia sady nahatonga tahotra sy fikorontanan-kevitra tao amin'ny aterineto mikasika ny zavatra mety hitranga manaraka. Hatreto, voalaza fa tsy naninona ireo fitaovana nokleary, ary voafehy ny taratra ratsy indrindra. Kanefa, an'arivony ireo mponina hafindra monina avy any amin'ireo faritra manodidina ireo ozinina roa famokarana hery nokleary any amin'ny Prefektioran'i Fukushima. Maro ireo fampitahàna natao tamin'ilay loza Chernobyl tany URSS tamin'ny 1986, nefa mbola tsy voafaritra tsara ny halehiben'ny fahasimbana mety hisy any Japana na ny isan'ireo aina afoy amin'izany. Ho tondro fampahafantarana ny ahiahy, ny iray amin'ireo tenifototra vaovao farany dia ny #save_fukushima.
@Soc214:友 達のご主人がここの制御にあたるため福島向かったらしい…着いてないと良いな…不謹慎だけど知り合いが危険な所に居ない事だけをまず祈ってしまう…。とり あえずテレビ報道下手すぎて状況分からず… 新聞はスピード面で大敗を期す模様。私は無力～ㅜㅜㅜ
@mamionbiscuit: Aty Fukushima aho. Fadiranovana. Ampy tena ampy izay. Maninona isika no manana ozinina famokarana hery nokleary? Maninona no aty Fukushima? Tsy mila zavatra vita avy amin'ny tànan'olombelona nefa tsy hainy harovana isika. Mampitombo ny fahoriana fotsiny izany. Tsy manao zavatra tsara na inona na inona . Tena fadiranovana. Fadiranovana.
@tksfn: Tsy afaka niresaka tamin'ny reniko any an-tanànan'Iwaki, nefa nifanakalo mailaka tamin'ny zanaky ny iray tampo tamiko aho ary nanamarina fa tsy naninona izy ireo. Amin'izao fotoana izao dia mihaino ireo vaovao momba ny loza any amin'ny Ozinina Nokleary any Fukushima izahay. Manana ahiahy aho mikasika ny fomba fandrindran'ny Governemanta ny fanapariaham-baovao.
@yyyhonda: 福島原発の問題は、世界が注目しているから政府もさすがに情報隠蔽はできないだろう。 本気で情報が収集出来てないとしたら、それはそれで大問題だが…
@yyyhonda: Mifantoka amin'ny Ozinina Famokarana hery nokleary any Fukushima daholo izao tontolo izao, noho izany dia tsy afaka hanafina ireo vaovao rehetra ny Governemanta . Raha tena manana fahasarotana izy ireo amin'ny fanangonana vaovao, dia tena olana goavana tokoa izany….
@ydme286: [Ozinina mpamokatra hery noleary any Fukushima] Raha tery ara-potoana ianao hitadidy ny fampitandremana nomen'ny NHK [TV], eritrereto ho tahaka ny “‘tazon-kahitra” izany. Miezaha mijanona ao anatiny, manaova saron-tava, borosio ny akanjonao rehefa hiditra ny trano, sasao ny tànanao sy ny tarehinao. Jereo, ireo fepetra tokony ho raisinao ireo dia tahaka ny fepetra isanandro ataon'ny olona voan'ny tazon-kahitra.
@marquee77:Mandra-pahazoantsika vaovao ofisialy mikasika ny Ozinina 1
@PABUR0216: Raha ny hevitro, loza voajanahary ilay fipoahana tany amin'ny Ozinina Famokarana Hery Nokleary. Tsy fahadisoan'iza na iza izany. Mihevitra aho fa ilaina ny fandraisana andraikitra amin'ny zavatra teneninao ao amin'ny twitter.
Maro ireo mpamoaka sy mpanoratra lahatsoratra ao amin'ny Global Voices no mipetraka any Japana ary misy vitsivitsy manoratra fanavaozana vaovao tsy tapaka momba ny taorian'ilay horohorontany ao amin'ny Twitter. Afaka harahinao ao amin’ ity lisitra Twitter ity izy rehetra.
Ampahany amin'ny fandrakofana manokana ny Horohorontany Japana 2011 ity lahatsoratra ity.
Tomomi Sasaki no nandika ireo tweets tao anatin'ity lahatsoratra ity.